Shun Lei Phyo – Trend.com.mm
Author: Shun Lei Phyo
စာတွေကျက်ပြီးတာနဲ့ ခဏ လေးနေရင်မေ့ နေပြီလား? ဒီလိုဖြစ်တာဟာ စာကို သေချာမကျက် ပဲ အ ပေါ်ယံကျက်လို့ဖြစ်တာလဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ဥာဏ်ကောင်းဖို့အတွက်အ ကောင်းဆုံးအစားစာများ
ဘ၀မှာလူတစ်ယောက်ကို ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထားပဲ ချစ်ဖူးလား? ဘာလိုချင်တပ်မက်မှုမှ မရှိပဲ လူတစ်ယောက်အပေါ်ချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တစ်ရာမှာ နှစ်ဆယ်တောင် ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ ဒါပင်မဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ကြည့်ပါ….
Posted on September 28, 2019 September 23, 2019 by Shun Lei Phyo
ဆင်တုတ်ကွေး ကပေးတဲ့ဒုက္ခကြောင့် လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်ပဲ တစ်ကွကွဖြစ်နေပြီလား?…. ဆင်တုတ်ကွေးက လူကိုတင်ဖျားစေတာမဟုတ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ အချိန်ကြာသည်အထိ နာကျင်ကိုက်ခဲ စေပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ဆင်တုတ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေတဲ့နည်းလမ်းကောင်း…
EX ဆီက သူငယ်ချင်းလိုပဲနေရအောင်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံသင့်လား?
Posted on September 22, 2019 September 16, 2019 by Shun Lei Phyo
ပြတ်သွားပင်မဲ့ငါတို့ သူငယ်ချင်းလိုတော့ပတ်သတ်လို့ရပါသေးတယ်ကွာ… ဆိုတဲ့ စကားကို သင့်ချစ်သူဟောင်းက (သို့) အိမ်ထောင်ဖက်ဟောင်းက ပြန်ပြောလာဖူးလား? တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on EX ဆီက သူငယ်ချင်းလိုပဲနေရအောင်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံသင့်လား?
မျက်လုံးလေးကျန်းမာ နေဖို့အတွက် သင်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား? မျက်လုံးဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက်သိပ်ကို အ ရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ မျက်လုံး လေးအားကောင်းကျန်းမာနေဖို့လည်းလိုအပ်သလို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on သင်မျက်လုံးကိုပစ်ထားမိပြီဆိုတာ ဒါမျိုးလေးတွေကပြောပြနေ…
စိတ်လုံခြုံ အေးချမ်းရတဲ့ဘ၀ကို နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းလိုတဲ့အခါ…
Posted on September 22, 2019 September 20, 2019 by Shun Lei Phyo
တိုတောင်းလှတဲ့လူ့ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပူစရာတွေ ကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖယ်ရှားပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လူတိုင်းဖြတ်သန်းချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်အချက်လေးတွေကသင့်ရဲ့ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရအောင်ကူညီပေးမှာပါ.. 1. အပေါ်ယံ အမြင်တွေထက်သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုပိုထားပါ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on စိတ်လုံခြုံ အေးချမ်းရတဲ့ဘ၀ကို နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းလိုတဲ့အခါ…
မိန်းက လေးတိုင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲရမှာ သေချာတဲ့အ ခြေအ နေတွေဆိုတာ…
Posted on September 22, 2019 September 18, 2019 by Shun Lei Phyo
သင်တို့ရဲ့ တစ်သတ်မှာ တစ်ခါ တော့ကြုံဖူးကြမှာပါ…တကယ်ပါ ကိုယ်တွေမိန်းမတွေအတွက်သိပ်ထိရှရပါတယ်နေ်ာ… 1. လက်သည်းနီးဆိုးပြီးပြီချင်းတစ်ခုခုဖွင့်ရသောအခါ…. 😛 လက်သည်းနီဆိုးပြီးပြီးချင်း တစ်ခုခုကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on မိန်းက လေးတိုင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲရမှာ သေချာတဲ့အ ခြေအ နေတွေဆိုတာ…
ကမ်းခြေသွားရတာ ကြိုက်တဲ့မိန်းက လေးတိုင်သိထားသင့်စရာ…
Posted on September 22, 2019 September 23, 2019 by Shun Lei Phyo
ကမ်းခြေသွားရင်မိန်းကလေးတော်တေ်ာများများလွဲမှားတဲ့ နေတဲ့ တစ်ချို့သောကိစ္စလေးတွေကဘာတွေလဲ…ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေကကမ်းခြေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မှန်ကန်တာလေးတွေလည်းဆိုတာသိရှိနိုင်စေဖို့… (၁) ရေကူးဝတ်စုံရွေးချယ်တတ်ဖို့လို ရေကူးဝတ်စုံ ဖြစ်ရင်ပြီးရော လို့မထင်ပါနဲ့။ ရေကူးဝတ်စုံအ ရွေးမှားခြင်းကလည်းသင့်ရဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ကမ်းခြေသွားရတာ ကြိုက်တဲ့မိန်းက လေးတိုင်သိထားသင့်စရာ…
Posted on September 21, 2019 September 18, 2019 by Shun Lei Phyo
ကိုယ့်သားသမီးကို ရိုင်းစေချင်တဲ့ မိဘ ရယ်လို့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ?ကိုယ်ကမိဘ အုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးကို ယဉ်ကျေး လိမ္မာ စေချင်ကြမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on သားဆိုးသမီးဆိုးပိုင်ဆိုင်ထားရလို့စိတ်ပျက်နေပြီလား?
မျက်လုံးအောက်ကအသားရည်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့ နေကြလား?
Posted on September 21, 2019 September 19, 2019 by Shun Lei Phyo
မျက်လုံးအောက်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အသားရည်ခြောက်သွေးမှုတွေနဲ့ မျက်တွင်းညိုခြင်းတွေကို ဘာလိုနည်းတွေနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်သလဲ ဆိုတာ… 1. အချိန်မှန်မှန်အိပ်ရာဝင်ပါ ညအိပ်တာများဘာဆန်းလဲလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပင်မဲ့ ပုံမှန်အချိန်လေးတစ်ခုထားပြီး ညမနက်အောင်နေခြင်းဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on မျက်လုံးအောက်ကအသားရည်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့ နေကြလား?